ABB Robotics Mepụtara Ngwọta maka Hospitallọ Ọgwụ nke Ọdịnihu - RayHaber
[18 / 08 / 2019] National Express Train si Eskisehir N'ebe ọzọ na-adịghị emepụta na Turkey	26 Eskisehir
[18 / 08 / 2019] Google, Apple, Microsoft anaghị eche banyere ịgafe ọkwa okporo ụzọ	1 America
[18 / 08 / 2019] 3 n'ọdụ ụgbọ elu Istanbul. Runway Construction	34 Istanbul
HomeỤWAAmerica1 AmericaABB Robotics weputara ihe ngwọta maka ụlọ ọgwụ nke Ọdịnihu
27 / 07 / 2019 Levent Elmastaş 1 America, America, ỤWA, General, Mgbasa ozi 0
abb robotics meputara uzo edozi ulo ogwu n’abia
ABB emepeela ụlọ ahụ ike ọhụrụ na ogige ọhụrụ ahụ na Texas Medical Center (TMC: Texas Medical Center) na Houston, Texas, na-ekwupụta na ọ ga-ewepụta robots na ụlọ nyocha ahụike.
Ọktọba, ụlọ ọrụ a, nke a ga-emeghe na 2019, ga - abụ ụlọ ọrụ nyocha nlekọta ahụike nke onwe ABB. Ndị otu ABB ga-arụ ọrụ na ndị ọrụ ahụike, ndị sayensị na ndị injin nọ n'ogige TMC iji wulite usoro nchekwa ọgwụ na-abụghị nke ịwa ahụ, gụnyere teknụzụ na teknụzụ ụlọ ọrụ igwe eji eme ọgbara ọhụrụ.
Sami Atiya, Onye isi nke ABB Robotics na azụmahịa akpaaka na-emepụta, kwuru, yeni ọgbọ nke usoro nyocha ụlọ ọrụ etolite na Houston ga-eme ka usoro nyocha ụlọ akwụkwọ ahụ ike, belata ma ọ bụ wepụ ihe ịma aka nke ụlọ nyocha, ma nwekwuo nchekwa na nnabata. Nke a dabere na usoro ọgwụgwọ ọhụụ dị elu, dị ka ịgwọ ọrịa cancer na-eduga na Medicallọ Ọrụ Ahụ Ike Texas, mana taa chọrọ ntinye akwụkwọ ntuziaka na usoro nnwale na-eri oge. ”
Ka ọ dị ugbu a, ihe na-egbochi oke ọnụ ọgụgụ ndị ọrịa a ga-agwọ bụ mkpa ọ dị maka ndị ọrụ ahụike nwere ọkaibe, ndị na-etinye ihe ka ukwuu n'ọrụ ha na arụmọrụ ugboro ugboro na obere uru, dị ka ịkwadebe na ịkwadebe narị. Site na iji robots na-ejikọ ọrụ ndị a na akpaaka, ndị ọkachamara n'ịgwọ ọrịa ga-enwe ike ilekwasị anya n'ọrụ ndị ọzọ na-arụpụta ọrụ nke chọrọ nkà ndị ka elu, ha ga-enwekwa ohere ịgwọ ọtụtụ mmadụ site n'ịgba ngwa ngwa ike.
ABB enyochaala ọtụtụ usoro nyocha nke akwụkwọ ntuziaka na-ebu amụma na enwere ike ịme 50% nyocha ọzọ kwa afọ site na iji akpaaka, na nnyefe nke usoro ntughari na robots ga-ebelata mkpa ọ dị maka ndị mmadụ ịrụ ọrụ nke na-akpata mmerụ ahụ RSI ugboro ugboro.
Dika onu ogugu uwa n’etolite, mba n’etu otutu GDP ha n’ulo nlekọta ahu ike. Na mgbakwunye na imeziwanye nlekọta nke ndị ọrịa, ịba ụba arụmọrụ site na akpaaka na nlekọta ahụike ga-emekwa ka mkpebi nke ọtụtụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ndọrọ ndọrọ ọchịchị na nke ego kpatara mmefu ndị a. Dabere na ọmụmụ ụlọ n'ime ụlọ site na ABB, ahịa robot ọgwụ a na-anaghị awa ahụ na-eme atụmatụ iru 2025 na 2018 site na obere ihe mechiri 60.000.
Ihe mmekorita nke ABB jikoro ya na ulo oru ihe oriri na ihe onunu di nma maka ulo ogwu, ka ha nwee ike ha na ndi mmadu na-aru oru nke oma. Bobọchi robots ga arụ ọrụ dị iche iche ga na-aga n'ihu, nkenke oge, dị ka ị suchụ mmiri, ịgwakọta na pipetting, ịkwadebe ngwa ndị anaghị etinye aka, na itinye centrifugal na mwepu.
Houston nwere ebe dị mkpa n'ụwa na nyocha teknụzụ ọgwụ na ahụike ma na-enye ọnọdụ dị mma maka ụlọ ọrụ ahụike ABB ọhụrụ, gburugburu ebe obibi ihe ọhụrụ na TMC. Mpaghara 20 square, ebe otu ìgwè siri ike nke ndị ọrụ 500 sitere na ABB Robotics ga-arụ ọrụ, gụnyere ụlọ nyocha akpaaka na ụlọ ọzụzụ robot, yana ebe nzukọ a raara nye mmepe mmepe na ndị mmekọ mmekọ.
Mc Site na mmekorita a na-akpali akpali, Texas Medical Center na-aga n'ihu na-akpali ókè nke mmekorita ihe dabere na ndị isi ụlọ ọrụ na-eduga, Bill kwuru Bill McKeon, Onye isi ala na CEO nke Texas Medical Center. Anyị nwere ike ikwu na TMC abụrụla ebe mbụ nke ABB Robotics n'ihe gbasara ahụike. Ọ bụrụ n’ịgba ụlọ ọgwụ dịka obodo na-anabata ndị ọrịa 10 nde kwa afọ, ị ga-ebu ụzọ rụọ ọrụ na nkenke ma melite usoro ikwugharị dị mfe dịka o kwere mee. Ntinye aka ABB na TMC Innovation na ihe owuwu R&D a, ụdị nke mbụ, iji mepụta ụzọ ndozi nke ọrụ ahụike bụ ebumnuche nke kwezuru nkwa anyị. ”
Atiya gbakwụnyere: beraber Anyị na otu ụlọọgwụ ọgwụ kachasị ọhụrụ n'ụwa, anyị ji mpako zụlite usoro ihe ikuku na - arụkọ ọrụ maka Hospitallọ Ọgwụ nke Ọdịnihu, nwalee ha na ụlọ nyocha n'ezie, na-enye ndị ọrụ ahụike bara uru, ma na-emepe ihe ọhụrụ ma gbanwee arụmọrụ nke ụlọ nyocha ahụike gburugburu ụwa. Isi ihe dị na atụmatụ mmepe ogologo oge ABB bụ itinye ego na robots ọrụ na ịnọgide na-enwe ọhụụ na ngalaba a site na ị na-ebugharị ahụmịhe nke akpaaka anyị na mpaghara ọhụrụ dịka ahụike, dabere na ahụmịhe anyị na ngalaba akpaaka na eletriki.
Ngwa Robotic Na-abịa Ndụ na TÜDEMSAŞ maka Oge Mbụ na Sekọnd 18 / 10 / 2017 The aha nke ikpeazụ afọ nke investments mere na ibu ụgbọ ala ụlọ ọrụ n'ala ebe ọhụrụ na-ekwukarị okwu banyere Turkey Railway Machines Industry Inc. (TÜDEMSAŞ) na Bogie robot ịgbado ọkụ Unit eji na bogie mmepụta merie ihe ọhụrụ na ngalaba ulo oru. Mgbe ụlọ ọrụ a gasịrị, ụlọ ọrụ ahụ guzobere Wagon Sandblasting Plant maka Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Wagon ma họrọ ogwe aka robotic n'ebe a. Onye isi osote Director TÜDEMSAŞ, Celaleddin Bayrakçıl, kwuru na ha na-esochi anya na mmepe na mpaghara ahụ nakwa na ha ejiriwo ihe dị iche iche nke ụlọ ọrụ na-ahụ maka ihe ndị dị mkpa nke ụlọ ọrụ ahụ.
China na-emepe ụgbọ okporo ígwè nke nwere ike iru 600 kwa awa 07 / 11 / 2016 China na-emepe ụgbọ okporo ígwè nke nwere ike iru 600 kilomita kwa elekere: China, otu n'ime mba ndị isi na ụwa n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè, na-azụlite ụgbọ okporo ígwè nke nwere ike iji 600 kilomita kwa elekere. Ụlọ ọrụ Rolling Stock Corporation (CRRC), nke otu n'ime ndị na-emepụta ụgbọ okporo ígwè kasị ukwuu n'ụwa, na-aga n'ihu ịzụlite ụgbọ oloko nke na-eme ka ókèala. CRRC na nso nso a kwuputara na ha amalitela ịrụ ọrụ na ụgbọ oloko eletriki ọhụrụ. Ụgbọ okporo ígwè ọhụrụ a, nke ruru 600 kilomita kwa elekere, ga-abụ nke kachasị n'ụwa. Smart Rail World na-akọ na CRRC, bụ nke jikọrọ aka na gọọmenti China, bụ nke a
Turkey Avli Enhances Autonomous Vehicle 06 / 04 / 2017 Avli Turkey Autonomous Vehicles Enhances Automotive Technologies, ndị kasị ibu n'ụwa engineering ụlọ ọrụ, AVL si òtù ọrụ na Turkey kemgbe 2008 AVL Turkey, 2016 dị ka nke abụọ R & D mbụ anụ ụlọ driverless na adọ ụdị ụfọdụ malitere imepe electric ụgbọala technology na center. N'ebe a, ndị AVL Turkey General Manager Dr. 5 April 2017 nwere ogbako ogbako na Istanbul Switzerlandotel na Wednesday na òkè nke Umut Genç. nile di iche iche nke ike nnyefe na ahụmahụ nke n'elu 65 afọ na ubi nke akpakanamde technology, na-eje ozi maka imeziwanye n'ihe na-anwale usoro na rụọ AVL taa, abụọ R & D emmepe na injinịa 130 ndị mmadụ na Turkey ...
TCDD Taşımacılık AŞ na-eme ka mmekorita International 17 / 07 / 2017 TCDD Taşımacılık AŞ Enhances International Collaborations: Veysel Kurt, General Manager nke TCDD Taşımacılık AŞ, na-enwe usoro nzukọ ụwa na Istanbul na July 10 na July 11 iji mee ka ndị njem na mba na njem na-ebuwanye ibu. N'oge okwu na ndị nnọchianya nke Romania, Bulgaria na Ukraine ụgbọ okporo ígwè, mmepe nke mmekọrịta na mpaghara nke ngwa ngwa, gụnyere RO-LA njem, nke na-enye njem nke ụgbọala site ụgbọ ala, a tụlere. Tụkwasị na nke a, TCDD Transport na BDZ Cargo bịanyere aka na protocol iji mee ka ọnụ ọgụgụ ụgbọ ala, ụgbọ oloko na ọnụ ahịa nke ibu na-ebu iji mee ka njem ụgbọ ibu na-ebuwanye ibu ...
Ulusoy Elektrik na-emepụta kataner usoro na Turkish injinịa ike 27 / 07 / 2017 Ulusoy Elektrik na-emepụta Railway Lines Catenary System Solutions na ya onwe ya ika, mepụtara R & D na Product Development ọrụ dabeere na ụkpụrụ nke mmepụta ụlọ. Ụlọ ọrụ ahụ, nke na-ebute ọnọdụ ya na ahịa na ngwaahịa Catenary System nke eji mee ihe n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè, nke e tinyere na ọrụ nke R & D Center, mụbara òkè nke mmepụta ụlọ na ọrụ ntanetị nke ọrụ ụgbọ okporo ígwè nke mba anyị ma gbochie ịdabere na mba ndị ọzọ ma mụbaa ikike mbupụ ya na ọrụ ya na mba ọzọ. Ndị na-emepụta Insulators, Ndị na-eduzi ihe (Ogwe njedebe, Grifs, wdg.), Tensioner Automatic. Sait Ulusoy, Onye isi oche nke Board of Directors, imiz A na-eme atụmatụ nchịkọta njikwa dị mma na ọrụ niile nke ụlọ ọrụ anyị ...
China meziwanye 350 Km Ụzọ ụgbọ mmiri ozuzo na-adọkpụ kwa awa 05 / 01 / 2019 Daily Science and Technology (Science and Technology Daily) Institute of China Railways, Fuxing 350 kilomita kwa hour elu-ọsọ ụgbọ okporo ígwè mere ngwa ngwa na ọ na-akpaghị aka kọrọ ịzụlite a akara usoro na-enye ohere nhazi. Tuesday, January 1 mba ụgbọ okporo ígwè ụlọ ọrụ nke akpaka ụgbọ okporo ígwè ọrụ (ODS) kwuru na ya mbụ na-eji usoro n'etiti obodo nke Beijing na Hebei ógbè Zhangjiangko. Ụgbọ okporo ígwè ga-adị na 2022 tupu Winter Olympics. Usoro OT ga - eme ka ndị ọrụ ụgbọelu na ụgbọ okporo ígwè ahụ kwụsị ịnwụ na ọdụ ma mepee ọnụ ụzọ maka ndị njem ahụ. N'aka nke ọzọ, usoro ahụ ga-eme ngwa ngwa ma ọ bụ mee ka ụgbọ okporo ígwè ahụ kwụsị ngwa ngwa dị ka tarifụ ahụ dị. Usoro OT adịlarị na mpaghara Guangdong sistemi
Slovakia Railways na-eweta WiFi ngwọta na ụgbọ oloko 10 / 04 / 2012 Slovakia Railways (ZSSK) na-amalite usoro nyocha nke ụfọdụ ọrụ ikuku nke Intercity trains na Bratislava - Kosice. Ule a ga - ewe ọnwa atọ. Usoro, nke na-achọ ịjụ olu data zigara na ọkwa afọ ojuju nke ndị njem ahụ metụtara, ga-agụnye àgwà nke nyocha nyocha. "Ihe mgbaru ọsọ anyị bụ mgbe nile iji nyefee njikọ ịntanetị na ụgbọ okporo ígwè mbụ na ụgbọ okporo ígwè IC," ka Pavel Kravec, bụ Director General nke Slovak Railways (ZSSK) kwuru. Isi: Raillynews
Robat Control na-enye ihe ngwọta pụrụ iche nye ụgbọ okporo ígwè ụgbọ okporo ígwè 09 / 02 / 2016 Robat Kontrol na-enye ihe ngwọta nke ọkwọ ụgbọ okporo ígwè: Robat Kontrol na-enye ngwọta pụrụ iche pụrụ iche na mpaghara ụgbọ okporo ígwè na ike ya dị elu na ọhụụ ọhụrụ. General Manager nke Robat Control Murat Yeşiloğlu; Uz Anyị na-anwa ime ike anyi maka mmepe nke nkà na ụzụ ụlọ. axle agụta usoro a chọrọ ma na Turkey na ná mgbasa nke mepere emepe okporo ígwè egosi usoro ndị na-arụ ọrụ siri ike n'ụzọ zuru ezu etinye dị iche iche anāchi achi nke anyị ụlọ solution, "ọ na-ekwu. Ụlọ ọrụ ahụ, nke na-enye ọrụ n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè ụzọ abụọ, Robat Kontrol na Setray, na-arụ ọrụ na ARI Teknokent na Istanbul Technical University.
Kayseri Na-enye Ngwọta Ndị Nwere ọgụgụ Isi Maka Ọdịpụ Dị Ukwuu 31 / 05 / 2017 Kayseri Metropolitan Na-enye Nghọta Nghọta na Ụgbọ njem: Kayseri Metropolitan Municipality Kayseri Transportation Inc. Ọ gbanwere na ntanetị na ntanetị kọmputa na Urban Transit Control Systems. Mayor Mustafa Celik, letara ebe nchịkwa na-arụ ọrụ na Ngalaba Alaka nke Bus, chọtara nyocha. President Mustafa Celik, usoro a dị ọhụrụ; Otú ọ dị, ọ sịrị na ọ na-eme ka afọ ojuju dị mma site n'ịkwụsị mkpesa. Mustafa Çelik, Mayor of Metropolitan Municipality, gwara ya banyere Ụgbọ njem Ụgbọ njem nke Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Bus Management guzobere na Talas Road. Onye isi oru Feyzullah Gündoğdu'dan natara ozi. Gündoğdu kwuru na esemokwu atọ na-esochi bọs niile.
Ihe ngwọta nke nwere ike iji mee ihe na locomotives 18 / 08 / 2017 Nkwụsịtụ a na-atụghị anya ya na nhazigharị na ọrụ na-eme ka arụmọrụ nke arụmọrụ dịkwuo elu. Ụgbọ njem bụ otu n'ime ebe ndị a. Karịsịa, ihe ntanetị eji arụ ọrụ n'ime ụlọ ọrụ ụgbọelu na-achọpụta na ọpụpụ na nlekota ụgbọelu n'oge kwesịrị ekwesị. Ndị ọrụ na-enyekwa ọrụ dị ịrịba ama. Otú ọ dị, mgbanwe dijitalụ n'ọdụ ụgbọ njem abụghị nanị ụgbọ elu. N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ụlọ ọrụ okporo ígwè amalitela ịzụlite onwe ya maka mgbanwe mgbanwe dijitalụ. 150 ỌTỤTỤ ỌTỤTỤ ỌTỤTỤ ỌTỤTỤ ỤBỌCHỊ A na-atụfu ego a na-enweta kwa afọ na njem ụgbọ okporo ígwè dị ka dollar 150 maka locomotive. N'ileba anya na ugbochi nile eji eji ugbo n'uwa, ogo nke onu ogugu di ezigbo mkpa. Na mpaghara a ...
sistemụ robot ọgwụ
Taa na Akụkọ ihe mere eme: 18 August 1875 na Anatolia na Rumelia o
Mmelite nke njikọ dị na Divriği Kayseri Railway
Mmelite nke uzo di na Divrigi Erzincan Railway
Ngwa Robotic Na-abịa Ndụ na TÜDEMSAŞ maka Oge Mbụ na Sekọnd
China na-emepe ụgbọ okporo ígwè nke nwere ike iru 600 kwa awa
TCDD Taşımacılık AŞ na-eme ka mmekorita International
Ulusoy Elektrik na-emepụta kataner usoro na Turkish injinịa ike
Slovakia Railways na-eweta WiFi ngwọta na ụgbọ oloko
Robat Control na-enye ihe ngwọta pụrụ iche nye ụgbọ okporo ígwè ụgbọ okporo ígwè
Kayseri Na-enye Ngwọta Ndị Nwere ọgụgụ Isi Maka Ọdịpụ Dị Ukwuu
Ihe ngwọta nke nwere ike iji mee ihe na locomotives
Akwụkwọ akụkọ Họrọ ọnwa August 2019 (267) July 2019 (636) June 2019 (503) Mee 2019 (525) April 2019 (418) March 2019 (520) February 2019 (483) January 2019 (502) Ogwe 2018 (619) November 2018 (504) October 2018 (436) September 2018 (518) August 2018 (486) July 2018 (506) June 2018 (580) Mee 2018 (467) April 2018 (545) March 2018 (555) February 2018 (500) January 2018 (557) Ogwe 2017 (509) November 2017 (427) October 2017 (538) September 2017 (455) August 2017 (505) July 2017 (479) June 2017 (477) Mee 2017 (493) April 2017 (434) March 2017 (540) February 2017 (477) January 2017 (538) Ogwe 2016 (487) November 2016 (631) October 2016 (657) September 2016 (541) August 2016 (608) July 2016 (485) June 2016 (661) Mee 2016 (665) April 2016 (700) March 2016 (804) February 2016 (855) January 2016 (751) Ogwe 2015 (799) November 2015 (640) October 2015 (624) September 2015 (428) August 2015 (493) July 2015 (505) June 2015 (536) Mee 2015 (577) April 2015 (622) March 2015 (1017) February 2015 (878) January 2015 (1077) Ogwe 2014 (963) November 2014 (826) October 2014 (770) September 2014 (598) August 2014 (809) July 2014 (911) June 2014 (735) Mee 2014 (957) April 2014 (972) March 2014 (864) February 2014 (720) January 2014 (733) Ogwe 2013 (664) November 2013 (656) October 2013 (548) September 2013 (570) August 2013 (533) July 2013 (661) June 2013 (577) Mee 2013 (734) April 2013 (1059) March 2013 (1102) February 2013 (811) January 2013 (906) Ogwe 2012 (911) November 2012 (1168) October 2012 (831) September 2012 (886) August 2012 (976) July 2012 (863) June 2012 (591) Mee 2012 (445) April 2012 (563) March 2012 (699) February 2012 (546) January 2012 (417) Ogwe 2011 (149) November 2011 (35) October 2011 (23) September 2011 (18) August 2011 (25) July 2011 (18) June 2011 (16) Mee 2011 (13) April 2011 (13) March 2011 (33) February 2011 (24) January 2011 (13) Ogwe 2010 (335) November 2010 (12) October 2010 (15) September 2010 (12) August 2010 (16) July 2010 (9) June 2010 (19) Mee 2010 (6) April 2010 (3) March 2010 (62) February 2010 (303) January 2010 (1838) Ogwe 2009 (4) November 2009 (1) October 2009 (3) September 2009 (3) August 2009 (2) June 2009 (3) Mee 2009 (2) April 2009 (3) March 2009 (9) February 2009 (4) January 2009 (3) November 2008 (1) October 2008 (1) September 2008 (2) August 2008 (1) July 2008 (2) June 2008 (2) Mee 2008 (2) April 2008 (1) March 2008 (3) February 2008 (5) January 2008 (2) Ogwe 2007 (2) October 2007 (2) July 2007 (1) Mee 2007 (1) April 2007 (1) February 2007 (2) January 2007 (1) Ogwe 2006 (1) October 2006 (3) August 2006 (1) June 2006 (2) Mee 2006 (2) April 2006 (2) March 2006 (2) November 2005 (2) August 2005 (1) June 2005 (1) March 2005 (2) February 2005 (1) January 2005 (1) Ogwe 2004 (1) October 2004 (3) July 2004 (1) Mee 2004 (2) Ogwe 2003 (1) October 2003 (1) Mee 2003 (1) March 2003 (1) February 2003 (1) January 2003 (1) Ogwe 2002 (1) October 2002 (4) August 2002 (1) April 2002 (1) March 2002 (2) January 2002 (2) July 2001 (1) June 2001 (1) March 2001 (1) Mee 2000 (3) March 1999 (1) October 1998 (2) March 1998 (1) August 1997 (1) October 1996 (1) August 1996 (2) Mee 1995 (1) August 1992 (1) Mee 1990 (1)